iTranslate - Translator & အဘိဓါန်, စာသား Scanner | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » iTranslate - Translator & အဘိဓါန်, စာသား Scanner
iTranslate - Translator & အဘိဓါန်, စာသား Scanner APK ကို
iTranslate တစ်ခု All-In-One ဘာသာပြန်ဆိုသူ / traductor နှင့်စကားစမြည်ဘာသာကြောင်းအဘိဓါန် App ဖြစ်ပါတယ်စာသားများ, 60 + ဘာသာစကားများသို့ဓာတ်ပုံများ။
iTranslate နှင့်အတူသင်ကြိုက်နှစ်သက်မဆိုအရပ်မှခရီးနိုင်ပါတယ်။ Voice ကို-to-စကားသံကိုဘာသာပြန်ချက်သင်သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းကလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကူညီပေးဖို့စံပြ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကပိုဘာသာစကားအတားအဆီး! ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားကြည့်ပါ, သင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အသစ်သောအရာတို့ကိုသင်ယူကြသည်။
iTranslate အခမဲ့စကားသံကိုဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူသင်၏စကားဘာသာအဲဒီဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက်များအတွက်ဦးဆောင်ဘာသာပြန်ဆိုသူနှင့်အဘိဓါန် App ဖြစ်ပါတယ်။ သင်, သင်လိုချင်သည့်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏မည်သည့်ဘာသာစကားများအင်္ဂလိပ်စာကနေဘာသာပြန်ဆိုဥပမာစပိန်မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုနှင့်အပြန်အလှန် app ကိုသုံးနိုင်သည်။ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကအပြည့်အဝသုံးစှဲ Make: စီးပွားရေး, ခရီးသွား, ပင်ပညာရေး။
တစ်ဦးအဘိဓါန် app ကိုအမျှ iTranslate သငျသညျ, မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူစကားများသို့မဟုတ်အားလုံးကိုဘာသာစကားများဆိုစာပိုဒ်တိုများဖွင့်ကိုကြည့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝေါဟာရတည်ဆောက်, အမျိုးအစားအားဖြင့်အသစ်သောစကားလုံးများကိုလေ့လာသင်ယူကူညီပေးသည်။ အခုဆိုရင်သင်အမြဲသငျသညျအနားမှာစုံလင်သောအဘိဓါန်ရှိသည်။
Translator & အဘိဓါန် & စာသား Scanner - သင်တစ်ဦးဘာသာပြန်ဆိုသူသို့မဟုတ်အဘိဓါန်လိုအပ်တိုင်း iTranslate ထင်ပါတယ်။
- 60 ဘာသာစကားများကျော်ထဲမှာစာသားများအခမဲ့ဘာသာ Get
- (သင့်ရဲ့ device ပေါ်တွင်မူတည်) အထီးသို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအသံအတွက်ဘာသာကိုနားထောင်
- စကားပြော Mode ကို: Two-လမ်းလက်ငင်းမိန့်ခွန်းဘာသာပြန်ချက်
- ကင်မရာ Mode ကို: ဓါတ်ပုံနှင့် screenshots အတွင်းစာသားကို Translate
- ခွန်း Mode ကို: Speak နှင့်သင့် device ကိုအပေါ်မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြု. ဘာသာပြန်ဆို
- စကားအသုံးအနှုံးစာအုပျ: သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဘိဓါန်အနာဂတ်ကိုးကားဖိုလ်ဒါသို့စည်းရုံး Make
အာဖရိက, ဘေးနီး, ဖင်လန်ခြ, အာရဗီ, အဘိဓါန် Armenian-, Azerbaijani-, အဘိဓါန် Basque-, ဘီလာရု, ဘင်္ဂါလီ, ဘော့စျနီးယား, ဘူဂေးရီးယား, ကာတာလ, Chichewa, တရုတ်, Corsican- ခရိုအရှေ, ခကျြ, ဒိန်းမတ်, ဒတျချြ, အင်္ဂလိပ်, အဘိဓါန် Esperanto-, Estonian အဘိဓါန်, ဖိလစျ, ပြင်သစ်, ဖရီစီရလာစီယံ, ဂျြောဂြီယ, ဂျာမန်, ဂရိ, ဂူဂြာရ, ဟာအီတီ Creole, ဥစာ, ဟီဘရူး, ဟိန္ဒူ, ဟနျဂရေီ, လန်, အစ်ဂဘို, အငျဒိုနီးရှား, အိုငျးရ, အီတလီ, ဂျပန်, ဂျာဗား, ကန်နာဒါ, Kazakh-, ခမာ, ကိုးရီးယား, (Kurmanji) ဒျ, ခရူဂ , လာအို, လကျတငျ, အံ, အာနီယံ, Luxembourgish အဘိဓါန်, စီဒိုနီယံ, အာလာဂါစီ, မလေး, မလေးရာလ, မောလ်, ရီ, မာရသီ, လီး, မြန်မာ (ဗမာ), နီပေါ, ဘှ, ပါရျှတို, ပါရှနျပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, ပနျခြာပီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, Samoan အဘိဓါန်, စကော့ Gaelic, ဆားဗီး, ဆက်ဆိုသို, Shona အဘိဓါန်, စငျဒီ, ဆငျဟာလ, စလိုဗ, စလိုဗေးနီး, ဆိုမာလီ, စပိနျ, ဆူဒနျ, ဆွာဟီလီ, ဆှီဒငျ, Tajik-, တမီး, ဂု, ထိုင်း, တူရကီ, ယူကရိန်း, ဒူ, အဘိဓါန် Uzbek-, ဗီယက်နမ်, ဝလေ, ဇိုစာ , Yiddish-, ရိုရု, ဇူလူ။
iTranslate - Translator & အဘိဓါန်, စာသား Scanner
17.72 ကို MB
Joile Lee က
အားလုံး Translator - ...